Ardennes Horses, iray amin'ireo volavolan-dalàna tranainy indrindra | Soavaly Noti
Ardennes Horses, iray amin'ireo karazan-trondro tranainy indrindra
Jenny monge | | Karazan-tsoavaly
Amin'ity herinandro ity dia hihaona isika iray amin'ireo karazan-tsoavaly tranainy indrindra misy izany: soavaly ardenes. Izy ireo dia Nihalehibe tany Ardennes, Belzika, Luxembourg ary France. Saingy ny tantarany dia niverina tany Roma fahiny.
Equines izy ireo ampiasaina indrindra amin'ny asa fambolena na amin'ireo toerana ilaina hamindrana na hitaterana zavatra mavesatra, koa ho an'ny famokarana hena, ho an'ny hetsika fifaninanana ary hiampitana amin'ny karazany hafa.
Andao hiresaka bebe kokoa momba azy ireo.
Fantatra amin'ny anarana hoe Ardennes Draft Horse koa izy ireo fiaviany 50.000 XNUMX taona lasa izay, maha-zanaka mivantana an'ireo equines solontenan'ny sary hosodoko. Izy ireo koa dia ilay razamben'ny ankamaroan'ny karazan-tsoavaly soavaly.
Drafitra karazan-tsoavaly no be mpampiasa tamin'ny andro taloha ho mpitondra hery. Ireo karazana ankehitriny, araky ny fahafantarantsika azy ireo dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX tany ho any izy ireo. Voafantina izy ireo ary niampita teo ambanin'ny filan'ny tafika, fambolena ary indostrialy, mba hanao asa sasany mifandraika amin'ny entana, na milina mandeha izany na mitondra entana mavesatra.
Manokana, ny karazany resahina dia nivoatra nandritra ny taona maro nisian'ny tantara, lasa soavaly mahery lehibe, tena vonona ary feno fiainana.
ankehitriny dia eo amin'ny toerana voalohany ao amin'ny lisitry ny soavaly volafotsy frantsay, aorian'ny Percherons, ny Bretons ary ny Comtois.
Mizara roa ny typology ao anaty soavaly volavolan-tsoavaly soavaly mavesatra sy soavaly maivana. Ny teo aloha, manana haavo eo anelanelan'ny 170 cm sy 180 cm ary milanja 600 ka hatramin'ny 1000 kg mahery, no nampihetsika ny milina sy ireo singa mavesatra kokoa. Ity farany izay maivana kokoa noho ny lanjany dia natao ho an'ny dia hafainganam-pandeha avo kokoa (avo kokoa noho ny mandeha) ary ampifandraisina amin'ireo kalesy maivana. Ity farany koa dia ampiasaina amin'ny fifaninanana fifanintsanana.
Ny Ardenes dia eo anelanelan'ny hazavana sy ny mavesatra. Miaraka amin'ny lanjany eo anelanelan'ny 700 sy 1000 kg ary haavo eo anelanelan'ny 152 cm sy 163 cm, Tsy izy ireo no lehibe indrindra amin'ireo soavaly volavolan-tsoavaly, ary tsy izy ireo kely indrindra, ary izy ireo, satria izy ireo dia anisan'ny karazana mavesatra sy maivana, karazana volom-borona maro karazana.
Momba ny equines mahazaka mafy izay afaka miaina anaty toe-piainana ratsy miaraka amin'ny fivelomana kely. Izy ireo dia malalaka, hozatra ary matevina, miaraka tongotra fohy sy matevina. Izany rehetra izany no mahatonga azy ireo a soavaly mahery indrindra. Na eo aza izany hery sy tanjaka ara-batana rehetra izany dia manana ny toetrany izy ireo milamina sy mora ampiasaina, izy ireo koa dia manana ny lalan'ny velona.
Manana iray izy ireo loha malalaka miaraka amin'ny maso malaky sy sofina maranitra, izay mijanona amin'ny vozona malalaka. Ny vombony dia volo lava sy lava amin'ny rantsam-batana.
Raha ny volony dia afaka manolotra izy ireo sosona misy loko samy hafa: roan, thrush, chestnut na chestnut, indraindray miaraka amin'ny sasany volo fotsy amin'ny faritra sasany, toy ny loha na ny tongotra. Ny loko tsy avela amin'ity karazany ity dia mainty.
Toy ny soavaly soavaly rehetra, miankina amin'ny asa ataony, dia mila sakafo sy fikarakarana manokana izy ireo mba hitazomana ny fahasalamany sy ny toe-pahasalamany.
Araka ny efa noheverinay tany am-piandohan'ny lahatsoratra dia miatrika soavaly soavaly antitra tokoa izahay. Misy angona vitsivitsy izay maneho an'io, toy ny efa nisy sahady notononin'ny amperora romana Julius Caesar tao amin'ny kaontiny momba ny fandresen'ny Gauls, izay niresahany ny fanoherana lehibe ananan'ireo mpitaingina zaridaina.
Mipetraka ao amin'ny faritra frantsay sy belza any Ardennes izy io, izay niavian'ny anarany, nandritra ny 2000 taona teo ho eo. Hitanay ihany koa ny ardenes any Suède, vokatry ny fiampitana soavaly avy any avaratry ny firenena.
Ny karazana belza an'ny soavaly Ardennes dia nipoitra avy any an-tendrombohitra.
Nandritra ny tantaran'ity karazany ity dia nifangaro tamin'ny ra Ardennes hafa izy. Ary, toy ny fitoviana maro any amin'ny faritra, dia azo inoana fa misy ra Arabo vokatry ny fanafihana Silamo an'i Eropa. Aoriana, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, mba hanamaivanana ny karazany sy hanatsara ny fanoherana azy dia fantatra fa nafangaro tamin'ny soavaly arabo izy io.
Inoana fa ny hazakazaka ankehitriny, avy amin'ny soavaly ady ampiasaina amin'ny Moyen Âge.
Ny mazava dia izy ireo amin'ny fangatahana adidy amin'ny ady, be tokoa ho an'ny mpitaingin-tsoavaly mitaingin-tsoavaly ary ho toy ny soavaly haingam-pandeha ho an'ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Mba hanomezana ohatra roa izay nampiasan'izy ireo dia nanafika an'i Russia ny tafika Napoleonika na tamin'ny Ady lehibe voalohany.
Amin'ny faran'ny Taonjato faha-XNUMX, ny lakroa niaraka tamin'i Le Brabant dia niteraka zana-kazo matanjaka kokoa sy lehibe kokoa, tena mety amin'ny asa fambolena sy ala.
Le Brabant no volavolan-tsoavaly belza, miavaka amin'ny faharanitan-tsaina sy ny habe ary ny hozatra. Ny lahy dia manodidina ny 170 cm ary ny vavy 166 cm. Izy ireo dia manana endrika matanjaka amin'ny soavaly volom-borona miaraka amin'ny toetrany tena malemy paika sy malemy paika. Ireo toetra rehetra ireo dia nampitaina tamin'ny soavalin-tsoavaly tao Ardennes, na izany aza, Vokatr'izany, ny karazana soavaly Arden ankehitriny dia mitovy amin'ny Brabant.
Ireo equines ireo dia nentina tany Etazonia tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny voalohany dia noraketina an-tsoratra dia tamin'ny 1920.
Any amin'ny tendrombohitra frantsay sy belza no ananganana azy amin'izao fotoana izao, na dia hita any amin'ny faritra soedoà samihafa aza izy io. Nifangaro tamin'ny hazakazaka eropeana sy aziatika izy ireo ra mangatsiaka, hanatsarana ny mampiavaka ireo karazany ireo, mampitombo ny habeny sy ny tanjany.
Ankehitriny dia mbola ampiasaina matetika ihany izy io, ho an'ny asa amin'ny toeram-pambolena sy tanimboaloboka ary ala kely. Izy io dia nakarina ihany koa ho an'ny tsenan-kena.
Ny isan'ny santionany amin'ity karazany ity dia tsy dia be loatra toy ny taloha, fa Mbola karazany malaza io noho ny fifaninanana sy seho izay tanterahina any Eropa Avaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Ardennes Horses, iray amin'ireo karazan-trondro tranainy indrindra
Vitamina sy otrikaina ho an'ny soavaly
Soavaly Appaloosa sy ny palitaon'izy ireo mampiavaka azy